Kweli nqanaba wena uxanduva ukuzisa izilwanyana ezine ukuya ezantsi ngokusindisa, badle esisesabo 20 000 iingongoma, ngaphandle kweli nqanaba olukhohlisayo ukuba banikwa izilwanyana ezintandathu ukuya emsebenzini kunye, ilusizi kodwa yinyani, wenze ungabeka ezimbini ngohlangothi kwaye!
Ngesizathu esithile iibhloko kweli nqanaba nje BMW dibanisa ukuya ukwenza imifelandawonye ezinkulu, akukho firecracker ukuba earnt kwaye ngeendaba ezilungileyo kuphela akukho mda kwinani lihamba.
ibhokisi Metal, iikhetshi bavaleleke amatye ongeze bulawu bungangobo omncinane kule ukumncoma esele ligqatsa, kuwa zikwimizekelo kwiglasi ukuba kufuneka besaphula phambi kokuba uzisebenzise yaye asiyongcamango ilungileyo (ufundwe etyebisa omkhulu, yenze!') ukuba smash Ziyaqhubeka yakho evuliwe phambi ekuvuleleni rocks..yeah wakho Ndafumanisa ukwenza oku ngendlela engalunganga ngaba ngokwenene sehlise umlilo yakho!
Beka iibhokisi zakho metal malunga iziqhushumbisi ukuba adutywadutywe.
Ukuba ungazama ukuqokelela iibhokisi zakho metal ngeenxa ukuqhushumba eye igqojozwe, oku kuya kukunceda ndibatshabalalise kuba kanye nabo bonke. Enye indlela nibe nako ubatshabalalise azishiye kwi phezulu ikholam kwaye Makabaleke ke unkqonkqozile off njengoko le miqulu screen, oku kungaba olukhohlisayo nangona nje kukho lidla ukuba into ehleli phezu kwabo kanye njengoko oku ukuba kwenzeke…okanye kwimeko yam xa kwenzeka, Ndiye ilahlwe izilwanyana ezininzi kangaka uzama ukuba kudlule eli nqanaba!
Kodwa njengazo zonke uKumkani imidlalo lwenkohliso kunokwenzeka! nenjongo nje ukudala iibloko umbala kwaye khetha ngobulumko zithuthwa zakho, ukukhumbula yonke into kuye ngenxa, nokuhlanganisa ndlela ibhetele ukuvula up iindibaniso abaninzi ekugqibeleni isitshixo kulo mdlalo. Ngo- ukunyamezelana, okuninzi luck nesahlulo enkulu qhinga uza kukwazi nut ngaphandle!
Filed Under: level 69, Uncategorized Tagged: Nceda, level 69